Nolosha Muslimiinta Ee Magaalada Manchester Kadib Qaraxyadii Dhacay, Geeridii Aabihii Ku Timid, Soo Laabashadiisii Man United Iyo Waxyaabo Kale Oo Uu Paul Pogba Ka Hadlay. – WWW.Gool24.net
Nolosha Muslimiinta Ee Magaalada Manchester Kadib Qaraxyadii Dhacay, Geeridii Aabihii Ku Timid, Soo Laabashadiisii Man United Iyo Waxyaabo Kale Oo Uu Paul Pogba Ka Hadlay.
Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa waraysi dheer oo dhinacyo badan uu kaga hadlay siiyay majalada Esquire magazine waxaana wax laga waydiiyay qaraxyadii magaalada Manchester lagu qarxiyay iyo saamaynta ay dadka muslimiinta ah ku yeelatay wuxuuna Pogba kala fogeeyay dadka wax qarxiya iyo diinta islaamka.
Paul Pogba oo bishii barakaysnayd ee Ramadan soo gutay cumarada isla markaana dhulka barakaysan ee Mecca waqti ku soo qaatay ayaa sheegay in haddii dadka mulimiinta ah loo wada arko dad la mid ah kuwa qaraxyada gaystay in markaas ay guulaysan doonaan dadka dhibta gaysanaya oo uu sheegay in ayna islam shaqo ku lahayn.
Paul Pogba ayaa sidoo kale ka hadlay geeridii ku timid aabihii dhamaadkii xili ciyaareedkii la soo dhaafay si la mid ah qiimaha badan ee ay Manchester United kula soo wareegtay iyo haddii uu samayn ku yeeshay waxaana sidoo kale Pogba wax laga waydiiyay qaabkii uu Man United uga baxay.
Haddaba waraysiga oo dheer waxaa halkan idiinku soo koobaysa shabakada Gool24.net iyada oo xidiga muslimka ah ee Paul Pogba uu si dareen badan uga hadlay dhacdooyinka aan soo sheegnay halan ayaanad kaga bogan kartaa.
Pogba oo ka hadlaya sida ay dadka mulimiinta ah ugu adag tahay in ay Manchester ku noolaadaan kadib qaraxyadii dhacay ayaa yidhi: “Waa waqti aad u adag, laakiin isma dhiibi kartid. Inagu uma ogolaan karno in maskaxdeena galaan waxaa waajib inagu ah in aan u dagaalano”.
Pogba oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Waxyaabaha murugada lihi nolosha way ka dhacaan laakiin adigu ma joojinaysid in aad noolaato. Ma dili kartid bini’aadamka. In bini’aadam la dilaa waa wax waali ah, sidaa daraadeed ma doonayo in ay diin ku lug yeelato. Kani ma aha islaamnimo qof kastaana taas wuu ogyahay. Anigu ma ihi qofka kaliya ee taas sheegaya”.
Intaa kadib Paul Pogba ayaa ka hadlay geerdii ku timid aabihii wuxuuna yidhi: “Marka aad waydo qof aad jeceshahay uma fikiraysid si la mid ah. Taasi waa sababta aan u sheego in aan ku raaxaysto nolosha sababtoo ah si deg deg ah ayay u socotaa. Waxaan xusuustaa markii aan la hadlayay aabahay isla markaana hadda halkan ma joogo. Isagu waxa uu ahaa nin aad u xoogan, wuu dagaalamay laakiin da’diisa umay sahlanayn. Isagu waxa uu ahaa nin fiican, aabe aad u fiican, waxaan u han waynahay in aan wiilkiisa ahay”.
Paul Pogba oo wali xusuusta aabihi ka sii hadlaya ayaa yidhi: “Waxa uu isagu ahaa mid ka mid ah ragga ugu fiican, maad badan, markasta oo aad waqti la qaadato isaga waad qoslaysay, sidoo kale aad ayuu xariif u ahaa, sababtoo ah waxa uu ahaa professor. Waxaa qasab kugu noqonaysa in aad waxyaabihii fiicnaa xusuusato”.
Paul Pogba ayaa 89 milyan gini ugu soo laabtay Man United waxaana la waydiiyay haddii lacagtan badani ay saamayn ku yeelatay wuxuuna yidhi: “Kadib hal usbuuc anigu waan ilaaway. Waa dadka kuwa i xusuusiyaa, sababtoo ah dhaamaadka qof kastaaba wuu dhimanayaa kan ugu qaalisan iyo kan ugu qiimaha yar waxay tagayaan xabaal isku mid ah, sidaa daraadeed anigu xataa kamaan fikirin”.
Markale Paul Pogba oo ka hadlaya eedayntii loo soo jeediyay bandhigii Man United ee xili ciyaareedkii dhamaaday ayaa yidhi: “Waxaan anigu aqbalay in aanan si fiican u ciyaarin, tan maanu samayn, taas maanu samayn, waan ogahay waxaanu samaynay waxaanu ku guulaysanay saddex koob. Taas ayaa ah waxa aan anigu ogahay, taas ayaana ah waxa ugu muhiimsan”.
Pogba oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Waxaad noqon kartaa kooxda aduunka ugu fiican, waxaad ciyaari kartaa kubbada cagta oo fiican isla markaana wax koobab ah kuma guulaysanaysid-ayaa xusuusanaya iyaga? cidna, sax miyaa?”
Paul Pogba oo sababtii uu Man United uga baxay ka hadlaya ayaa yidhi: “Anigu waxaan Manchester uga baxay in aan ciyaaro. Taas ayay ahayd waxa aan doonayay inkasta oo aan yaraa. Waxaan dareemayay in aan ciyaaro hadda isla markaana aanan doonayn in aan sugo”.
” Sidaa daraadeed haddii ayna Manchester United ahayn waa in ay cid kale noqoto, laakiin maskaxdayda waan ka ogaa in ayna dhamaan oo ay suurtogal tahay in aan soo laabto. Hooyaday ayaa ii sheegtay: ‘ Maalin ayuun baad soo laaban doontaa’. Halkan ayaan hadda joogaa oo aan timaha ku jaranayaa Manchester”. ayuu Pogba hadalkiisa kusii daray.